Mampanantena ny nosy Cook hanoherana ny COVID-19
Home » etn » Mampanantena ny nosy Cook hanoherana ny COVID-19
The Nosy Cook mitatitra fa efa nisy ary mbola mijanona ho faritra tsy misy COVID-19. Ny "Fampanantenan'ny Nosy Cook" dia fanekena iraisana hiarovana ny mponina rehetra ao amin'ny Nosy Cook sy ireo mpitsidika iraisam-pirenena amin'ny COVID-19. Ny governemanta dia nametraka programa maromaro hanampiana amin'ny fiarovana sy fiomanana amin'ny fotoana hisokatra ny sisin-tany ka ao anatin'izany ny programa Cookingapp "CookSafe" sy ny "Kia Orana Plus" hampiofana ny programa mpanofana.
Ny Cook Islands Promise dia miaro amin'ny otrikaretina mahery vaika antsoina hoe COVID-19. Raha matoky ny firenena fa hanokatra sisintany any Nouvelle-Zélande, ny governemanta dia manantitrantitra ny mpitsidika sy ny mpiasan'ny fizahan-tany rehetra ny maha-zava-dehibe ny fampiharana ny fahadiovana ara-batana sy ny fepetra momba ny fahadiovana.
Ny Fampanantenan'ny Nosy Cook dia nambara tamin'ny 16 aprily 2020 manohana ny firenena ho faritra tsy misy COVID-19. Raha ny angom-baovao ao amin'ny tranonkalan'ny Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dia tsy nitatitra tahiry momba ny tranga COVID-19 tany amin'ny World Health Organization ny Nosy Cook. Noho izany, heverina fa tsy fantatra ny risika COVID-19 any amin'ny Nosy Cook.
Ny praiminisitra Hon. Henry Puna izay minisitry ny fizahantany koa dia nilaza fa ny fanoloran-tenany dia miasa manerana ny faritra 3: ny Zone General, ny Zone Zone, ary ny faritra ijanonana. Ny faritra tsirairay dia mitaky hetsika avy amin'ny Nosy Cook sy avy amin'ireo mpitsidika.
Ao amin'ny Zone General, ampirisihina ny fanalavitra ara-batana pragmatika. Halaviro ny toerana be olona, ​​ny toerana akaiky anao ary ny toerana voafetra na mihidy. Tazomy ao anaty baomba ny fianakavianao sy ny namanao akaiky. Raha ao anatin'ny 2 metatra ivelan'ny baombao ny olona dia aza mifanerasera mivantana, indrindra ireo izay marefo.
Sasao tsy tapaka ny tananao, sarony kohaka sy fitsikiana, ary aza mikasika ny tavanao. Entanina ny sarontava raha mikohaka ianao na raha tsy azo atao ny manalavitra vatana.
Halaviro ny fikasihanao zavatra tsy ilaina amin'ny magazay na eny ambonin'ny toerana.
FITSABETSIKA REHETRA SY FIVAROTANA, TRANSPORT, ASA ATAO IZAO.
Toeram-pisakafoanana, kafe sy fisakafoanana: Mikaroha safidy amin'ny fisakafoanana miaraka amin'ny trano fandraisam-bahiny, mety ho afaka hanome vaovao momba ny serivisy amin'ny efitrano, amin'ny fisakafoana ao amin'ny efitrano, sakafo fisakafoanana, na fanaterana sakafo. Avela hisakafo any ivelany anefa, azafady, manaova famandrihana mba hisorohana ny vahoaka tsy ilaina.
Fitateram-bahoaka (sidina anatiny, bisy ary famindrana): Mety tsy ho mora foana ny manalavitra vatana, azafady araho ny tari-dalan'ny mpampiantrano anao; Halaviro ny fikasihan-tanana tsy ilaina ary mifandray mivantana amin'ireo ivelan'ny bubble anao. Sasao na hadio matetika ny tananao.
Bara sy alim-pandihizana, Toetra manintona, tranokala, fivarotana sy birao: Aza mifanerasera mivantana amin'ireo ivelan'ny bubble anao sy ny fikasihan-tanana tsy ilaina. Azafady mba midiniha amin'ny ekipa momba ny protokol fiarovana, raha tsy azo antoka.
MIHAOKA AMIN'NY FANAMPINY REHETRA REHETRA AO ANATIN'NY TRANO TRANO, AIR BNBs sns. ACCOMMODATORS NO LOHATEN'NY fifandraisana voalohany amin'ny fampahalalana sy fanampiana.
fandraisana: Miomàna amin'ny fifandraisana kely indrindra amin'ny fisoratana anarana sy fizahana; Hamarino tsara fa nomena ny mpandray anao alohan'ny fahatongavanao ny pitsopitsonao manokana.
entana: Mba hisorohana ny fifandraisana ara-batana tsy ilaina, rehefa mangataka ianao dia mety hatolotra mivantana eo am-baravaranao ny entanao. Manentana anao izahay mba tsy hihoatra ny fonosana ary hividy sakafo sy zava-pisotro eo an-toerana.
Fanompoana efitrano: Mamporisika ny hanompoana efitrano tsy misy ifandraisany izahay ary mangataka ny fanampianao handao ny efitrano mandritra ny ora fanamoriana efitrano. Manontania amin'ny mpametaka anao.
Trano fialantsasatra (Sakafo sy zava-pisotro): Azonao atao ny mangataka amin'ny mpampiantrano anao hitahiry ny vata fampangatsiahana sy ny pantry anao alohan'ny hahatongavanao.
Fampivoarana ny indostrian'ny tsenan'ny nify, ny famakafakana ny fangatahana ary ny fahafaha-mitombo | Dentsply Sirona, GC America, SDI Limited
Mpikarakara handao ny karnaval any Jamaika 2020